Myanmar SF Bay Area, San Francisco, CA, United States, San Francisco, CA (2022)
From all the Burmese Events here in the San Francisco Bay Area, California USA
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့တွင် Free Burma Action Committee မှ (၅၇) ကြိမ်မြှောက် သပိတ်တိုက်ပွဲအား ပြုလုပ်ကျကျင်းပခဲ့ကြတည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး၊ အဓမ္မ ဖမ်းဆီးခံရသူများအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှတ်ပေးရေး၊ ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်အား လုံးဝလက်မခံကြောင်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်မှ အနိုင်ကျင့် အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးအား လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အားအပြည့်အဝ ထောက်ခံကြောင်း၊ အမေရိကန်လွှတ်တော်မှ Burma Bill အားအမြန်ဆုံး အတည်ပြုပေးရေး နှင့်
စစ်ဖက်ဆစ်အောက် ဒူးမထောက်ဆိုတာကို ရဲ့ရင့်စွာပြသရင်း ကျဆုံးသွားကြသော သူရဲကောင်းများအတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာ ဘေးဧရိယာ မိသားစုများမှ ဆုတောင်း ကြွေးကြော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၀၄.၀၉.၂၀၂၂
#စစ်အာဏာရှင်စနစ်မုချကျရှုံးရမည် #SupportNUG #savemyanmar
#WeSupportCRPH #wesupportNUG #WhatsHappeningInMyanmar #MyanmarMilitaryCoup
#HearOurVoice #ASEANrejectSAC #RejectCoupRejectASEAN #RejectJuntaRejectASEAN
ဖက်ဆစ်စစ်တပ်အမြစ်ဖြတ်မယ့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို က ရန်ပုံငွေပွဲ
CRPH Support Team (San Francisco Bay Area) က ပြုလုပ်တဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ ရန်ပုံငွေပွဲမှာ စုစုပေါင်း ရရှိငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ $၆၇၆၆၈ကျပ် ($67668)ဖြစ်ပါကြောင်း CRPH Support Team SF Bay Area မှ ထုပ်ပြန်ကြေညာ...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၃.၂၇.၂၀၂၂
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့တွင် Free Burma Action Committee မှ (၅၅) ကြိမ်မြှောက် သပိတ်တိုက်ပွဲအား ပြုလုပ်ကျကျင်းပခဲ့ကြတည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး၊ အဓမ္မ ဖမ်းဆီးခံရသူများအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှတ်ပေးရေး၊ ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်အား လုံးဝလက်မခံကြောင်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်မှ အနိုင်ကျင့် အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးအား လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အားအပြည့်အဝ ထောက်ခံကြောင်း၊ အမေရိကန်လွှတ်တော်မှ Burma Bill အားအမြန်ဆုံး အတည်ပြုပေးရေး နှင့်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၃.၂၆.၂၀၂၂
Burma's Human Rights Day Rally
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ နှင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး-- မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် စုပေါင်းလူထူဆန္ဒပြပွဲ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၃.၁၂.၂၀၂၂
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့တွင် Free Burma Action Committee မှ (၅၃) ကြိမ်မြှောက် သပိတ်တိုက်ပွဲအား ပြုလုပ်ကျကျင်းပခဲ့ကြတည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး၊ အဓမ္မ ဖမ်းဆီးခံရသူများအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှတ်ပေးရေး၊ ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်အား လုံးဝလက်မခံကြောင်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်မှ အနိုင်ကျင့် အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးအား လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အားအပြည့်အဝ ထောက်ခံကြောင်း၊ အမေရိကန်လွှတ်တော်မှ Burma Bill အားအမြန်ဆုံး အတည်ပြုပေးရေး နှင့်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၃.၀၅.၂၀၂၂
မြန်မာပြည်သူပြည်သား အပေါင်း ငြိမ်းချမ်းသော နေ့ရက်လေးတွေ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိနိုင်ကျပါစေ 🙏
Free Burma Action Committee-- Northern California မှကြီးမှုးကျင်းပသော အမိမြန်မာပြည်ကိုကူညီနိုင်ဖို့ နွေဦးတော်လှုန်ရေး ဆောင်းဦးလှိုင် ဂီတပွဲတော်
ဇန်နဝါရီလ ၂၉, ၂၀၂၂
မြန်မာပြည်သူပြည်သား အပေါင်း ငြိမ်းချမ်းသော နေ့ရက်လေးတွေ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိနိုင်ကျပါစေ 🙏Free Burma Action Committee-- Northern Cal...
Free Burma Action Committee-- Northern California မှကြီးမှုးကျင်းပသော အမိမြန်မာပြည်ကိုကူညီနိုင်ဖို့ နွေဦးတော်လှုန်ရေး ဆောင်းဦးလှိုင် ဂီတ...
Free Burma Action Committee မှ (၅၀) ကြိမ်မြှောက် သပိတ်တိုက်ပွဲ
ပြည်တွင်းကနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအသံတိတ်သပိတ်တိုက်ပွဲကြီးမှာရဲရဲတောက်ပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကိုဉီးညွှတ်ဂုဏ်ပြုကြမယ်၊NUCC ရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်အတည်ပြုရေးပြည်သူ့ညီလာခံကိုထောက်ခံကြိုဆိုတယ်၊လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့လေယာဉ်မပျံသန်းရ(NO FLY ZONE)အမြန်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်း၊အမေရိကန်သမ္မတကြီးနဲ့
ယုံကြည်တွေနဲ့၊ စစ်ဖက်ဆစ်အောက် ဒူးမထောက်ဆိုတာကို ရဲ့ရင့်စွာပြသရင်း ကျဆုံးသွားကြသော သူရဲကောင်းများအတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာ ဘေးဧရိယာ မိသားစုများမှ ဆုတောင်း ကြွေးကြော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ဘေးဧရိယာ
"နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ ရန်ပုံငွေဂီတပွဲများအနက် အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ရန်ပုံငွေရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲ။
မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး ရန်ပုံငွေအတွက် “ Sacramento ဆောင်းဦးလှိုင်ဂီတ ရန်ပုံငွေ ပွဲတော်ကို " ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် က အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း Sacramento မြို့မှာ Free Burma Action Committee ( Northern California) မှ ဦးစီးကျင်းပခဲ့ရမှာ ရန်ပုံငွေအလှူ (၁၀၃,၂၁၂ ဒေါ်လာ ) ရရှိခဲ့ပါတယ်။ယင်းအလှူငွေကို ကြေငြာထားသည့်အတိုင်း အပြည့်အဝလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲမတိုင်ခင် ပွဲစီစဉ်သူများရဲ့ ပွဲကုန်ကျစရိတ်သီးသန့်လှူဒါန်းငွေ (၆၇၉၅ ဒေါ်လာ) ပေါင်းထည့်ပါက စုစုပေါင်း (၁၁၀,၀၀၇ ဒေါ်လာ) ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အလှူငွေများကို Free Burma Action Committee ( Northern California) မှာ ပါဝင်တဲ့ San Francisco , Bay Area, Sacramento, and Central Valley မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ All Burma Generations- Sacramento နှင့် အဆိုတော်ဆောင်းဦးလှိုင်၏ ကိုယ်စာလှယ်များပါ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေး အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေဖို့ ထိရောက်စွာ လှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုလို ဒီပွဲအောင်မြင်ပြီးမြောက်သွားစေရန် မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာသည့် နေရာမှ မေတ္တာဖြင့် အခကြေးငွေ မယူပဲ လာရောက်ဖြေဖျော်ပေးရုံမျှမက မိမိရရှိသောအလှူငွေမှ သီချင်းမူပိုင်ရှင်တဦးအား ကန်တော့ရန် $၄၀၀ မှလွဲ၍ ကျန်ငွေအားလုံး လှူဒါန်းသွားသော အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင်အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။"
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့တွင် Free Burma Action Committee မှ (၄၇) ကြိမ်မြှောက် သပိတ်တိုက်ပွဲအား ပြုလုပ်ကျကျင်းပခဲ့ကြတည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး၊ အဓမ္မ ဖမ်းဆီးခံရသူများအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှတ်ပေးရေး၊ ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်အား လုံးဝလက်မခံကြောင်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်မှ အနိုင်ကျင့် အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးအား လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အားအပြည့်အဝ ထောက်ခံကြောင်း၊ အမေရိကန်လွှတ်တော်မှ Burma Bill အားအမြန်ဆုံး အတည်ပြုပေးရေး နှင့်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၁.၀၈.၂၀၂၂
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့တွင် Free Burma Action Committee မှ (၄၆) ကြိမ်မြှောက် သပိတ်တိုက်ပွဲအား ပြုလုပ်ကျကျင်းပခဲ့ကြတည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး၊ အဓမ္မ ဖမ်းဆီးခံရသူများအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှတ်ပေးရေး၊ ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်အား လုံးဝလက်မခံကြောင်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်မှ အနိုင်ကျင့် အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးအား လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အားအပြည့်အဝ ထောက်ခံကြောင်း၊ အမေရိကန်လွှတ်တော်မှ Burma Bill အားအမြန်ဆုံး အတည်ပြုပေးရေး နှင့်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့
ဒီဇင်ဘာလ ၁၉, ၂၀၂၁
Burma Peace Concert Fundraiser
အမေရိကန်နိင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ဘေးဧရိယာ၊ တွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိသားစုများ စုပေါင်းကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဂီတပွဲတော်...
ပွဲစီစဉ်သူများမှ ရရှိလာတော့ အလှူငွေအားလုံးဒိုကို အမိမြန်မာပြည်တို့ ပေးပို့လှူတန်းသွားမည်ဟုသိရပါတည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၁, ၂၀၂၁
တို့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ဘယ်တော့မှ မကြေ။
ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ် ကို လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်းကို ရဲ့ရင့်စွာပြသရင်း ကျဆုံးသွားကြသော သူရဲကောင်းများအတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာ ဘေးဧရိယာ မိသားစုများမှ အင်္ကျီအနက်ရောင် ဝတ်ဆင်၍ နှင်းဆီပန်း အနီရောင်များကိုင်ဆောင်ပြီး ဆုတောင်း ကြွေးကြော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ
(ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအပေါ် စစ်မိစ္ဆာတွေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဖွယ် ကားဖြင့်တိုက်သတ်ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှု့ကြီးအား ပြင်းထန်စွာရှုံ့ချပါတည်၊၊)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၁၂.၄.၂၀၂၁
"အဖြူရောင် ဖဲကြိုး ကမ်းပိန်း"
မြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်မှ အနိုင်ကျင့် အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးအား လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ကိုအလေးထားပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့တွင် Free Burma Action Committee မှ (၄၄) ကြိမ်မြှောက် အဖြူရောင် ဖဲကြိူး သပိတ်တိုက်ပွဲအား ပြုလုပ်ကျကျင်းပခဲ့ကြတည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး၊ အဓမ္မ ဖမ်းဆီးခံရသူများအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှတ်ပေးရေး၊ ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် စစ်တပ်အား လုံးဝလက်မခံကြောင်း၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အားအပြည့်အဝ ထောက်ခံကြောင်း၊ အမေရိကန်လွှတ်တော်မှ Burma Bill အားအမြန်ဆုံး အတည်ပြုပေးရေး နှင့်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၁၁.၂၇.၂၀၂၁
From Fremont to Freedom of Burma
အမေရိကန်နိင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ၊ ဖရီးမောင့်မြို့တွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိသားစုများ စုပေါင်းကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် "နွေဦးတော်လှန်ရေး အစားသောက်ပေါင်းစုံ သပိတ် ၂" ဈေးရောင်းပွဲ
နိုဝင်ဘာလ ၂၁, ၂၀၂၁
♥️ "နွေဦးတော်လှန်ရေး အစားသောက်ပေါင်းစုံ သပိတ် ၂" ဈေးရောင်းပွဲ သို့ လာရောက်ပါ၀င် လှူဒါန်းကြသော အစား‌ သောက် အလှူရှင်များ၊ ၀ယ်ယူစားသောက်သော အလှူရှင်များ၊ အလှူငွေလှူဒါန်းကြသော အလှူရှင်များ အားလုံးတို့မှ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကျသည့် တိုင်းရင်းသား မိဘပြည်သူ အပေါင်း ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုရန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ $ ၄၁,၀၇၇ ကျပ် (ခန့်မှန်းချေ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၈၀၀ ကျော်) အား NUG သို့ပေးပို့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါတည်။
Be the first to know and let us send you an email when Myanmar SF Bay Area posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to Myanmar SF Bay Area:
DC Studios Bay Area